डा. गोविन्द केसीलाई नेकपा सचेतक शान्ता चौधरीको खुलापत्र
डाक्टरसाब, समाजको भलाईका लागि लागिपरेका हामीले कठोर बन्नैपर्छ : नेकपा सचेतक शान्ता चाैधरी
नेकपा सचेतक शान्ता चाैधरी
२०७५ माघ १३ आइतबार
डाक्टरसाब, तपाईं व्यक्तिगत लाभहानी र स्वार्थभन्दा माथि उठेर सोच्नुहुन्छ भन्ने सुनेकी छु । म सांसद पदमा छु । मेरा पनि वरिपरी निजी स्वार्थका लागि लागिपरेकाहरु आइपुग्छन्, तिनलाई पहिचान गर्ने प्रयास गर्छु । को मानिस देश र समाजको भलाइका लागि मेरो उपयोग गर्न चाहन्छन् । को निजी हितमा मेरो उपयोग गर्न चाहन्छन् भन्ने ठम्याउन नसकेर म कतिपय ठाउँमा अप्ठेरोमा पनि परेकी छु । शायद तपाईंलाई पनि यस्तो अप्ठेरो धेरै पटक आइलागेको हुनसक्छ । अहिले तपाईं यस्तै अप्ेठेरोमा फस्नुभएको छ कि भन्ने मलाई लाग्दैछ ।
प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गरिरहँदा म भावुक भएँ । कांग्रेसका सांसद मित्रहरुले वैठकमा अवरोध गरिरहनुभएको थियो । हाम्रा लागि वैठकमा अवरोध, नारावाजी सामान्य कुरा हो । सधैं भइरहन्छ, वर्षाैंदेखि यस्तै भइरहेको छ । शुक्रवार पनि अवरोध बीच विधेयक पारित भयो । म किन भावुक बनेकी थिएँ भने समितिबाट विधेयक पारित हुँदा अब तपाईंले कहिल्यै अनसन बस्न पर्दैन भन्ने दृढ विश्वाश थियो, समितिमा रहनुभएका सांसद साथीहरुले पनि यही विश्वाश प्रकट गरिरहनुभएको थियो । कांग्रेसका सांसद साथीहरुले चाहिँ विधेयकको विरोध गर्नुभयो ।
यसमा म डाक्टरसाबलाई के जानकारी गराउँ भने हामीले कस्तो संसदीय परम्परा बसायौं भने सत्तापक्षले जे काम गरे पनि प्रतिपक्षले विरोध गर्नैपर्ने । त्यसैले तपाईंकै मागमा आधारित भएको विधेयक भए पनि कांग्रेसका सांसद साथीहरुले विरोध गर्दा मैले अन्यथा ठानिन ।
पारित भएको विधेयकमा तपाईंको शतप्रतिशत माग पूरा भएको छैन भन्ने म पनि मान्छु । शतप्रतिशत माग पूरा हुने अपेक्षा गर्न हुँदैन डाक्टरसाब । म आफै सांसद हूँ, म जे चाहन्छु त्यो संसदले पारित गरिदिँदैन । संसदको नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ, उहाँले चाहेको शतप्रतिशत कुरा संसदबाट पारित हुन सक्दैन । नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेको संसदले शतप्रतिशत मानेर पारित गरेको छैन । सभामुख हुनुहुन्छ कृष्णबहादुर महरा । उहाँले जे चाहनुहुन्छ संसदबाट त्यो पारित हुँदैन । संसद भनेको जनप्रतिनिधिहरुको थलो हो । संसदले यो देशका सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
यस्तो ठाउँमा म शान्ता चौधरीले जे चाहन्छु त्यही पारित हुनुपर्छ भनेर मैले कहिले पनि भनेकी छैन र भविष्यमा पनि भन्ने छुइन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि म जेजे चाहन्छु, संसदले त्यही पारित गर्नैपर्छ भन्न थाल्नुभयो भने गलत हुनेछ । हामी सांसद आफैले भनेको कुरा समेत आफू सदस्य रहेको संसदले पारित गरिदिँदैन, त्यसो भए हामीले पनि मैले भनेको संसदले मान्नैपर्छ भनेर अनसन गर्नु ?
तपाईं चुनाव लड्न्भएन । चुनाव लडेर सांसद बन्नुभएको थियो भने असाध्यै राम्रो हुने थियो । अनसन बस्न तपाईंलाई निरन्तर र वारम्बार उत्प्रेरित गर्ने मित्रहरुले तपाईंलाई चुनाव लड्ने सुझाव किन दिएनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ मैले शायद कहिल्यै पाउँदिन ।
तपाईं चुनाव लड्न्भएन । चुनाव लडेर सांसद बन्नुभएको थियो भने असाध्यै राम्रो हुने थियो । अनसन बस्न तपाईंलाई निरन्तर र वारम्बार उत्प्रेरित गर्ने मित्रहरुले तपाईंलाई चुनाव लड्ने सुझाव किन दिएनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ मैले शायद कहिल्यै पाउँदिन । तर, आउँदो आमचुनावमा तपाईं उम्मेदवार बनेको देख्ने विनम्र आग्रह भने यही पत्र मार्फत् गर्दछु । अहिले तपाईं आफै सांसद हुनुहुन्थ्यो भने पनि आफूले जस्तो चाह्यो त्यस्तो विधेयक पारित गर्न सक्नुहुन्नथ्यो । किनभने संसद भनेको कोही एकजनाले चाहे अनुसारको निर्णय गर्ने थलो होइन र यो सम्भव पनि छैन । तर, तपाईंका लगभग सबै माग पूरा भएको छ ।